Imifula emfuleni, ihlathi elimanzi elimanzi - yilapho ungathola khona lesi sitshalo esincane esineqhwa ngamagqabi amahle aqoshiwe namaqoqo aphuma kunambitheka omnandi, ekhethekile futhi ane-ukunambitheka okubabayo, okuphambene nesiphuzo. Lokhu kuhamba. Sekuyisikhathi eside kusetshenziselwa ukwenza ukupheka, ubhiya, kanye nokuphumula. Imithi yendabuko nayo ayizange ishiye eceleni futhi ithole ukusetshenziswa okubanzi kwezingodo. Kule ncwadi sizokhuluma ngama-cones we-hops nomphumela wayo emzimbeni.
Hop - ummeleli we-hemp yomndeni. Lesi isitshalo esingapheli senyuka esinezihlahla ezinezimpande ezinamanzi. Amahlamvu esitshalo avulekile, ahlukaniswe ngamatshumi amathathu nanhlanu. Amaqabunga angenhla ahlangene, amaqabunga aphansi ayenamakhadi, ahlukumezayo kuya kumathinta, nge-margin encane. I-curly stem, ingafinyelela ubude bamamitha angu-4-5, i-ribbed, ne-enclining enclining spines eceleni kwezimbambo. Izimbali zinobulili obufanayo no-dioecious. Izimbali zabesifazane zihlala nge-pedicel emfushane, eqoqwe ngama-pineal inflorescences, ahlelwe ngamabhulashi noma ngezingoma. Izimbali zesilisa - ezinama-pedicels amancane, eqoqwe ama-panicles akhazimulayo. Isithelo se-hoops yisinki esinesisindo. Isikhathi sokuqhakaza singuJulayi-Agasti.
AmaHops ajwayelekile engxenyeni yaseYurophu yaseRussia, eSiberia, eCaucasus. Ikhula emahlathini ashisayo, eduze kwamabhange omfula, ema-alders, ehlathini, enhlabathini enomswakama, enhlabathini evundile. Esikolweni, liyalinywa ngenxa yezidakamizwa, ukudla nokuhlobisa.
Njengempahla eluhlaza yokwelapha, i-hop cones ivunwa. Iqoqo lenziwa esimweni esihle sezulu, ngaphambi kokuqala kokuvuthwa okugcwele, okungukuthi, lapho ama-cones enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka nge-tinge ephuzi. Gwema ukukopisha ngesiqu esifushane. I-cones ye-hops ine-flavour ekhethekileyo e-resinous, ine-ukunambitheka okubabayo.
Ukwakhiwa kwama-hop cones.
Ama-inflorescences wesifazane - ama-cones - aqukethe izinto ezihlukahlukene ezisebenzayo ezinomthelela wokuphefumula emzimbeni:
i-phytoncides yi-bactericides yemvelo;
i-resin - inempahla ye-bactericidal, ikhuthaza ukuphulukiswa;
amafutha abalulekile - anika ama-hops iphunga elikhethekile elikhethekile, elinomphumela wokuqeda isimiso sezinzwa, unendawo yokuthuthukisa ukugaya;
I-Lupulin - into ebabayo, inomphumela wokuqeda;
amavithamini weqembu B, i-ascorbic acid - ayadingeka ukuze kusetshenziselwe izinqubo zemithi;
ama-tannins - anikeze isenzo se-bactericidal and astringent;
phytoestrogens - izinto eziphilayo ezisebenzayo, umphumela wazo kufana nesenzo se-estrogens - ama-hormone wesifazane omzimba;
i-flavonoids - i-flavonoid eyinhloko ye-hop cones - i-xanthohumol, esiza ukuqinisa izicubu zethambo, futhi ikwazi ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinhlobo ezithile zomdlavuza, njengomdlavuza wesifo sofuba;
ama-acids ephilayo (i-humulenic, i-valerian, i-hmeled) - thatha ingxenye ekhuthele ezinkambisweni zemithi.
Isicelo sezokwelapha kanye nomthelela wezinhlanzi emzimbeni womuntu.
Izigaxa zalesi sitshalo zokwelapha zisetshenziselwa ukuphuza, ukuphahlazeka kwe-spasmolytic (ngokususwa kwe-spasm yezintuthwane ezibushelelezi zezingaphakathi zangaphakathi), i-analgesic, nazo zinezimpikiswano zokulwa nokuvuvukala nezomzimba.
Izidakamizwa ezisekelwe kuma-hop cones zisetshenziselwa izifo nezifo ezihlukahlukene:
ngokunyuka komthwalo we-neuropsychic, ukulala, ukucindezeleka - njengento yokudambisa;
nezifo ezihlukahlukene ezihambisana ne-neuralgic, joint joint or muscle pain (arthritis, intercostal neuralgia, sciatica, esikhathini esibuhlungu nabanye) - njengendlela yokukhulula ubuhlungu;
ezinezifo zesimiso sokugaya - njenge-antispasmodic, kanye nokuthuthukisa ukugaya;
nge-dystonia ye-vegetative-vascular (ngesifiso sokwandisa ukucindezelwa kwegazi) - njengendlela yokucindezela okujwayelekile nokuphumula;
nezifo ezivuvukalayo zezinso kanye ne-urinary tract - njenge-antispasmodic, anti-inflammatory and diuretic;
lapho umjikelezo wokuya esikhathini uphazamiseka, ama-cones asetshenziswa kanye nezinye izindlela endleleni yokwelashwa okunzima.
Imithi yendabuko iyazi kanye nezindlela zesicelo sangaphandle sezinselo:
njengama-poultices namafutha anemivimbo, i-radiculitis, ukukhulula ubuhlungu emalungeni;
njenge-rinse ngezifo ze-nasopharynx nomlomo womlomo;
futhi ukumnika ukuphatha isikhumba sesisu nge-seborrhea, esetshenziselwa ukwelashwa kwezilonda nezifo zesikhumba.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ezikhungweni eziphezulu zezilingo ziyingozi, ngakho-ke ngamalungiselelo asekelwe kuwo udinga ukuqaphela. Uma kwenzeka ukudlula ngokweqile, kungase kube khona ukuhlolelwa ikhanda, ukushaywa kwe-malaise jikelele, umuzwa wokukhathala jikelele, ubuthakathaka, ukukhwabanisa, ukuhlanza nokuphefumula nokuhlupheka esifundeni senhliziyo.
Ukupheka kokulungiselela imithi evela kuma-hop cones.
Ngokusekelwe kuma-cones we-hops, ungakwazi ukulungiselela ukugonywa kokusetshenziswa komlomo nangaphandle.
Nansi iresiphi yokufaka ngomlomo:
uthathe isipuni se-½ oqoshiwe, uthele i-1 inkomishi yamanzi abilayo, vumela ukuthi iphuze imizuzu engu-15, bese uvula bese uthatha imizuzu engu-30 ngaphambi kokudla indebe yesithathu kathathu ngosuku. Kuyinto epholile, e-spasmolytic ne-anesthetic enhle.
Iresiphi yukusetshenziswa kwangaphandle:
uthathe amathisipuni amabili we-hops, uthele indebe yesibili yamanzi abilayo, vumela ukuthi iphuze imizuzu engu-15, uhlume futhi usebenzise ngaphandle ukwelashwa kwezifo zesikhumba.
Kodwa, njengoba belungiselela itiye eliphumuzayo ngama-cones we-hops ne-valerian:
faka i-teapot ye-1 isipuni yama-cones owomile we-hops nezimpande ezomile ze-valerian, uthele indebe 1 yamanzi abilayo bese ushiya ukuma imizuzu engu-15. Gxila futhi uphuze indebe eyodwa ebusuku.
Ungakhohlwa ukuthi uma kwenzeka ukudlula ngokweqile, imithi esekelwe ezitshalweni ingaba yingozi.
Izinzuzo zamafutha e-flaxse ubuhle nempilo
Indlela yokubhekana nokuqhuma ubisi
I-Menorrhagia: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Izindlela zokwelashwa kwezifo zamehlo
Ukuphila komuntu siqu ka-Marat Basharov
Ukuzenza kwamehlo ama-blondes anamehlo aluhlaza
Izinketho ze-toppings ze-lavash rolls
Indlela yokuvuselela ubuso nokuyiloba?
I-Stew of duck nama-apula
I-Aqua Fresco Cocktail
Ukuzindla ekudaleni ukuvumelana okungokomoya
Ukuthuthukiswa kwengane kuze kube unyaka, ukufunda kusukela ekuzaleni
Ingane ayidli enkulisa
I-Popover (buns engenalutho)
Ingabe kuyingozi ukugqoka izinwele zakho ngesikhathi ukhulelwe?